CAJIIB: Cristiano Ronaldo oo dhaliyay goolal ka badan, isku darka inta ay dhaliyeen SHAN weeraryahan waaweyn – Gool FM
(Europe) 15 Okt 2019. Wargeysyada caalamka ayaa ilaa iyo haatan waxay si aan kala joogsi laheyn uga hadlayaan rigoorrkii uu xalay sameeyay Cristiano Ronaldo ee ah inuu gaaray goolkiisii ​​700-aad ee xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta.
Kaddib markii uu Cristiano Ronaldo gaaray goolkiisii ​​700-aad ee xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta, wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay illaa iyo haatan ciyaara kubadda cagta ee guushan gaaray wuxuuna fursad buuxda u heystaa inuu goolashiisa intaas ka sii badiyo.
Si aan u fahanno inta ay la egtahay guusha uu gaaray Cristiano Ronaldo, waxaan arki karnaa tiro ka mid ah weeraryahannada lagu tiriyo inay yihiin kuwa ugu fiicanaa sannadihii ugu dambeeyay, iyagoo lala barbardhigay rikoorrka gooldhalineed ee kabtanka xulka qaranka Portugal.
Haddaba isku darka goolasha 5 weeraryahan ayaa waxay ka yaryihiin inta gool uu Cristiano Ronaldo dhaliyay xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta.
Cristiano Ronaldo ayaa rikoorrkiisa gooldhalineed ee kubadda cagta wuxuu ku garaacay isku darta goolasha 5-ta weeraryahan ee kala ah Diego Costa iyo Álvaro Morata (Atletico Madrid), Roberto Firmino (Liverpool), Pedro (Chelsea) iyo Paulo Dybala (Juventus).
Isku darka goolasha 5-tan weeraryahan ayaa waxay gaarayaan 682 gool, laga soo bilaabo bilowga xirfadooda ciyaareed ee kubadda cagta ilaa iyo hada, waana in ka yar 18 gool, goolasha uu ka dhaliyay Cristiano Ronaldo xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta heer kooxeed iyo xulkiisa Portugal.
Diego Costa ayaa dhaliyay heer kooxeed iyo xulka qarankiisa 187 gool, Pedro ayaa dhaliyay 158 gool, Paulo Dybala ayaa dhaliyay 119 gool, Roberto Firmino 143 gool, iyo Alvaro Morata oo dhaliyay 75 gool.
Si kastaba ha noqotee, Ronaldo ayaa ku dhaliyay 700 gool, 976 kulan uu ciyaaray, isaga oo ku dhaliyay 0.71 gool halkii kulanba, halka 5-tan weeraryahan ay ciyaareen 2196 kulan, waxayna wali 18 gool ka dambeeyaan xiddiga reer Portugal.